Ma farqiga u dhexeeya duufaannada iyo duufaannada | Saadaasha Shabakadda
Haddii aan ka faaloon lahayn waa kuwee labada dhacdo ee saadaasha hawada iyo burburka ugu badan ee ka jira meeraha, shaki kuma jiri doono inay yihiin duufaanno iyo duufaanno.
Caadi ahaan waxaa jira xoogaa jahwareer ah marka ay timaado kala soociddooda, taasi waa sababta aan hoos ku sharixi doono astaamaha mid kasta oo ka mid ah si hadda wixii ka dambeeya aad ku ogaato midka mid ah iyo kan kale.
1 Farqiga u dhexeeya duufaanka iyo duufaanka
2 Waa maxay duufaan?
3 Sidee ayey duufaan u sameysantahay?
4 Astaamaha iyo cawaaqibta duufaanta
5 Waa maxay duufaan?
6 Sidee loo sameeyaa duufaan?
7 Dabeecadaha iyo astaamaha duufaanka
8 Qaybaha Duufaanta
8.1 Qeybta 1aad
8.2 Qeybta 2aad
8.3 Qeybta 3aad
8.4 Qeybta 4aad
8.5 Qeybta 5aad
Farqiga u dhexeeya duufaanka iyo duufaanka
Farqiga ugu weyn ee ugu horreeya ayaa ah meesha ay ka bilaabmaan abuurista. Marka laga hadlayo duufaannada, markasta wey sameysmaan dhulka ama meelaha xeebta ah ee dhulka ugu dhow. Taas bedelkeeda, duufaannada had iyo jeer way sameysmi doonaan badda dhexdeeda waana wax aan macquul aheyn in lagu abuuro dhulka. Farqi kale oo xusid mudan oo u dhexeeya labada astaamood waa in lagu ogaadaa xawaaraha dabaysha ay wataan. Xawaaraha duufaannada ayaa aad uga badan kan duufaannada, dabayshauna way ku gaari kartaa xaaladaha daran ka 500 km / h. Marka laga hadlayo duufaannada, xawaaraha dabaysha marar dhif ah ayey dhaaftaa ah 250 km / saacaddii.
Marka la eego cabbirka, sidoo kale waxaa jira kala duwanaansho weyn maaddaama duufaan caadi ah ama dhexdhexaad ah ay caadi ahaan leedahay dhexroor qiyaastii ah 400 0 500 mitir. Si kastaba ha noqotee, Duufaannada, si kastaba ha noqotee, waxay u muuqdaan kuwo aad u ballaaran tan iyo markii dhexroorkoodu gaari karo 1500 kiiloomitir. Marka loo eego muddada nolosha mid iyo tan kale sidoo kale waxaa jira kala duwanaansho weyn. Tornado-ku caadi ahaan waa kuwa cimri-dherer ah cimrigooduna wuxuu socon karaa daqiiqado yar. Taas bedelkeeda, nolosha duufaanku aad ayey u dheer tahay, oo waxay socotaa dhowr toddobaad. Tusaale dhow, waxaan ku xusi karaa Hurricane Nadine oo firfircoonayd aan ka yarayn 22 maalmood, laakiin sidoo kale waxaan leenahay duufaanta Irma kaas oo ahaa kii ugu awooda badnaa taariikhda badda Atlantika.
Farqiga u dambeeya ee u dhexeeya labadaas waxa loola jeedaa arrinta saadaasha. Duufaanta waa aad uga sii adag saadaasha marka loo eego xaaladda duufaanka, taas oo ka sahlan saadaalinta waddadeeda iyo goobta ay ku taagantahay.
Haddii aad rabto inaad waxbadan ka ogaato duufaannada ama duufaannada, sii wad akhriska maxaa yeelay weli waxaan haynaa macluumaad badan oo aan kaa siinno mowduuca.
Duufaanta duufaanku waa hawo tiro badan oo samaysa xawaare sare leh. Dhammaadka duufaanta waxay ku taal inta u dhexeysa dusha sare ee Dhulka iyo daruur cumulonimbus ah. Waa astaamaha jawiga hawada ee duufaanka leh qaddarka badan ee tamarta ah, in kasta oo ay sida caadiga ah muddo yar socdaan.
Duufaannada la sameeyo waxay yeelan karaan cabirro iyo qaabab kala duwan iyo waqtiga ay sida caadiga ah wareegayaan inta u dhexeysa dhowr ilbiriqsi iyo in ka badan saacad. Nooca ugu fiican ee loo yaqaan 'tornado morphology' waa daruur funnel, Dhamaadkiisa cidhiidhiga ahi uu taabto dhulka waxaana had iyo jeer ku wareegsan daruur soo jiideysa dhammaan boorka iyo qashinka ku xeeran.
Xawaaraha ay duufaantu gaari karto waa inta udhaxeysa 65 iyo 180 km / saacaddii waana ballaci kartaa 75 mitir. Tornado ma fariisato halkii ay ka sameysmaan, laakiin waxay ka gudbaan dhulka oo dhan. Caadi ahaan waxay safraan illaa dhowr kiiloo mitir ka hor intaan la waayin.
Midda ugu daran waxay lahaan kartaa dabaylo xawaare leh oo wareegaya at 450 km / saac ama ka badan, qiyaas ilaa 2 kiiloomitir ballac ah oo ku sii jira taabashada dhulka in ka badan 100 km oo waddo ah.
Sidee ayey duufaan u sameysantahay?
Duufaannada waxay ka dhashaan onkodka waxayna badanaa la socdaan roobdhagaxyaale. In ay tornaado sameysato, shuruudo isbedelka jihada iyo xawaaraha duufaanka, abuurista saameyn wareegsan. Marka saameyntani dhacdo, koorta toosan ayaa la sameeyaa iyada oo hawadu kor u kacdo oo ay ku wareejiso gudaha duufaanka.
Dhacdooyinka saadaasha hawada ee dhiirrigeliya muuqaalka duufaannada waxay u muuqdaan inay wax ka qabtaan inta badan maalintii inta ka badan habeenkii (gaar ahaan fiidka) iyo waqtiga xilliga gu'ga iyo deyrta. Tan macnaheedu waxa weeye in duufaanadu ay u badan tahay inay samaysato guga iyo deyrta iyo maalintii, taas oo ah, way ku badan yihiin waqtiyadan. Si kastaba ha noqotee, duufaanadu waxay dhici karaan wakhti kasta oo maalin ah iyo maalin kasta oo sanadka ah.
Astaamaha iyo cawaaqibta duufaanta
Duufaanta si dhab ah looma arki karo, kaliya marka ay qaado dhibcaha biyaha isku dhafan ee duufaanta hawada iyo boodhka iyo qashinka dhulka ku yaal, waxay noqonaysaa cirro.
Tornadoes waxaa lagu sifeeyaa inay yihiin dabeylo daciif ah, xoog badan, ama xoog badan. Duufaannada rabshadaha wata waxay ka kooban yihiin keliya boqolkiiba laba dhammaan tornaadooyinka, laakiin waxay sababaan boqolkiiba 70 dhamaan dhimashada waxayna socon kartaa saacad ama kabadan. Dhibaatooyinka ay geystaan ​​duufaanta waxaa ka mid ah:
Dadka, gawaarida iyo dhammaan dhismayaasha hawada lagu tuuray
Dhaawacyada halista ah
Dhimashooyin ay sababeen garaacista burburka duulaya
Khasaaraha dhanka beeraha ah
Khubarada saadaasha hawada malaha xarumo badan oo saadaalinta duufaannada sida duufaannada. Si kastaba ha noqotee, adoo ogaanaya isbeddelada saadaasha hawada ee go'aaminaya sameynta duufaan, khabiiro takhasus leh ayaa ka digaya jiritaanka duufaan si fiican horay loogu sii wado si loo badbaadiyo nolosha. Maalmahan waqtiga digniinta duufaanka waa 13 daqiiqo.
Duufaannada waxaa sidoo kale lagu garan karaa astaamaha samada qaarkood sida mid kadis ah oo mugdi iyo cagaar midab leh leh, roob dhagaxyaale oo weyn, iyo guux xoog leh oo la mid ah kan tareenka.
Duufaannada waxaa loo kala saaraa inay yihiin duufaanno ugu xoog badan uguna rabshadaha badan dhulka. Si loogu yeero duufaan waxaa jira magacyo kala duwan sida duufaanno ama duufaanno, iyadoo kuxiran meesha ay ka dhacaan. Ereyga cilmiyeed waa wareegga kulaylaha.
Kaliya duufaanada kuleylaha ee ka sameysma badweynta Atlantika iyo bariga badweynta Baasifigga waxaa loogu yeeraa duufaanno.
Sidee loo sameeyaa duufaan?
Si ay duufaan u samaysmaan, waa inay jiraan tiro badan oo hawo diirran oo qoyan (caadiyan hawada kulaylaha waxay leedahay astaamahan). Hawo diirran oo qoyan ayay duufaanta u isticmaashaa shidaal ahaan, markaa badanaa waxay ka samaysantaa meel ku dhow Equator.
Hawada ayaa ka kacda dusha sare ee badaha, iyadoo ka dhigeysa meesha ugu hooseysa hawo yar. Tani waxay abuureysaa aag cadaadis hawadeed oo hooseeya oo u dhow badda, maadaama ay jirto hawo yar halkii mug halkii.
Wareegga caalamiga ah ee hawada hareeraha meeraha, cufnaanta hawadu waxay ka dhaqaaqdaa meesha ay hawadu badan tahay waxayna u dhaqaaqdaa meeshii ay wax ka yar yihiin, taas oo ah, aagagga cadaadiska sarreeya iyo cadaadiska hoose. Marka hawada hareeraha aaggii looga tegey cadaadis hoose ay u dhaqaaqdo inay buuxiso "farqigaas", isna wuu kululaadaa wuuna kacayaa. Maaddaama hawada diirran ay sii kordheyso, hareeraha hareeraha ayaa wareegaya si uu u qaato booskiisa. Marka hawada soo baxaysa qaboojiso, iyadoo qoyan ayay samaysataa daruuro. Markuu meertadani socoto, daruuraha iyo nidaamka hawada oo dhan ayaa wareegaya oo koraya, waxaana shidaalka kuleylka badda iyo biyaha uumi baxa dusha sare.
Dabeecadaha iyo astaamaha duufaanka
Waxay kuxirantahay barta ay duufaantu samaysato, waxay u leexan doontaa dhinac ama dhinac kale. Hadday samaysantaa cidhifka woqooyi, duufaanku waxay u rogi doontaa saacad ka hor. Taas bedelkeeda, haddii ay ku samaysan yihiin cidhifka koonfureed, saacad bay u wareegi doonaan.
Marka hawadu sii socoto inay si isdaba joog ah u wareegto, isha (waxaa loogu yeeraa isha duufaanta) ayaa ku samaysan bartamaha, taas oo aad u deggan. Isha cadaadisku aad ayuu u hooseeyaa oo dabayl iyo hirar aan nooceyn midna jirin.
Duufaannada way daciifaan markay galaan dhulka, maadaama aysan sii wadi karin quudinta iyo ku korinta tamarta badaha. In kasta oo duufaannadu baaba'aan markay dhulka soo dhigayaan, haddana way ku xoog badan yihiin inay waxyeello iyo dhimasho keenaan.
Xaqiiqdii waxaad waligaa maqashay "Duufaanta Nooca 5aad." Waa Maxay Qaybaha Duufaanta Runtii? Waa hab lagu cabiro xoojinta iyo awooda waxyeellada leh ee duufaannada. Waxay u qaybsan yihiin shan qaybood waxayna kala yihiin sidan soo socota:
Dabaylaha saacadaha u dhexeeya 118 iyo 153 kiiloomitir
Dhaawaca ugu yar, inta badan geedaha, dhirta, iyo guryaha guurguura ama isjiidka aan si sax ah loo hubin.
Wadarta ama burburka xadhkaha korontada ama calaamadaha si xun u rakibmay. Barar 1.32 ilaa 1,65 mitir oo ka sarreeya sida caadiga ah.
Waxyeello yar oo soo gaadha dekedda iyo berkedda.
Dabaylaha saacadaha u dhexeeya 154 iyo 177 kiiloomitir
Waxyeello weyn oo soo gaadhay geedaha iyo dhirta. Burbur baaxad leh oo soo gaadhay guryaha guurguura, calaamadaha, iyo xadhkaha korontada soo ifbaxay.
Burburin qeyb ahaan saqafyada, albaabbada iyo daaqadaha, laakiin waxyeello yar ugeysata dhismayaasha iyo dhismayaasha.
Barar 1.98 ilaa 2,68 mitir oo ka sarreeya sida caadiga ah.
Wadooyinka iyo wadiiqooyinka u dhow waxyaalaha waa daadad.
Waxyeello weyn oo soo gaadha daloolada Maraakiibta ayaa daadad leh maraakiibta yaryarna waxay jabaan joodariyada meelaha bannaan.
Ka daadgureynta dadka deggan dhulka hoose ee degaannada ku teedsan xeebta.
Dabaylaha saacadaha u dhexeeya 178 iyo 209 kiiloomitir
Burbur baaxad leh: geedo waawayn oo dhulka la dhigay, iyo sidoo kale calaamado iyo astaamo aan si adag u rakibnayn.
Burburka saqafka sare ee dhismooyinka iyo waliba albaabada iyo daaqadaha, iyo sidoo kale dhismayaasha dhismayaasha yaryar. Guryaha guurguura iyo gawaadhidii safka laga qaadi jiray oo burburay.
Waxaa ku soo booday 2,97 ilaa 3,96 mitir oo ka sarreeya sida caadiga ah iyo daadad ku socda aagag ballaaran oo ka mid ah aagagga xeebta, iyadoo burbur ballaaran uu ku yimid dhismayaasha ku dhow xeebta.
Dhismayaasha waaweyn ee ku dhow xeebta waxaa si daran u waxyeeleeyay duufaanta iyo qashinka daad sabeynaya.
Dhul fidsan 1,65 mitir ama ka yar heerka badda ayuu daad ka badan 13 kiilomitir gudaha.
Qaxidda dhammaan dadkii degganaa dhulka xeebta ku teedsan.
Dabaylaha saacadaha u dhexeeya 210 iyo 250 kiiloomitir
Burbur baaxad leh: geedaha iyo geedo yar yar ayay dabayshu la tagtaa, xayaysiisyada iyo astaamaha ayaa la jeexjeexaa ama la baabi'iyaa.
Burbur baaxad leh oo soo gaadhay saqafyada, albaabada iyo daaqadaha. Wadar dumista saqafyada guryaha yaryar.
Inta badan guryaha guurguura ayaa burburay ama dhaawac culus soo gaadhay. - Barar 4,29 ilaa 5,94 mitir oo ka sarreeya sida caadiga ah.
Dhulalka fidsan ee 3,30 mitir ama ka yar ka hooseeya heerka badda ayaa daadadku gaarayaan illaa 10 kiilomitir gudaha.
Ka daadgureyn ballaaran dhammaan dadka deggan aagga qiyaastii 500 mitir u jira xeebta, iyo sidoo kale dhul hoose, illaa seddex kilomitir gudaha.
Dabaylaha wax ka badan 250 kiilomitir saacaddii
Burburka masiibada: geedaha iyo geedaha gebi ahaanba gebi ahaan ayaa la qaaday oo dabayshu xididaysay.
Burbur weyn oo soo gaadhay saqafyada guryaha. Xayeysiisyada iyo astaamaha waa la jeexjeexay oo la qarxiyay.
Wadarta dumida saqafyada iyo darbiyada guryaha yar yar. Inta badan guryaha guurguura ayaa burburay ama dhaawac culus soo gaadhay.
Barar 4,29 ilaa 5,94 mitir oo ka sarreeya inta caadiga ah.
Macluumaadkan waxaad si fiican ugu ogaan kartaa faraqa u dhexeeya duufaanka iyo duufaanka iyo waliba astaamaha lagu garto. Isbedelka cimilada awgood, ifafaalahan ayaa noqon doona kuwa soo noqnoqda oo aad u daran, sidaas darteed waxaa lagugula talinayaa in si wanaagsan loogu wargaliyo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Maxay ku kala duwan yihiin duufaannada iyo duufaannada
Sharaxaad wanaagsan; aad u dhaqmey
Sharaxaad aad u fudud oo la fahmi karo oo loogu talagalay dadka aniga oo kale ah oo aan aqoon khilaafaadkooda
Waad ku mahadsantahay macluumaadka, waa inaan qiraa inaan gebi ahaanba jaahil ka ahaa mowduuca.
Subax wanaagsan, ma aqaano haddii qof horey u soo jeediyay, laakiin waxaan u maleynayaa in haddii bam lagu tuuro isha isha duufaan ama duufaan abuura meel faaruq ah qaraxa, tani waxay soo afjari doontaa xoogga mawjadaha iyo qatarta ay tani u taagan tahay .
Jawaab JUAN CARLOS ORTIZ
sharraxaadda waxay sheegaysaa in duufaannadu yihiin duufaannada ugu xoogga badan laakiin tornaadooyinka waxay gaarayaan ku dhowaad 500 km / h waa inay dhahaan in tornaadooyinka ay ka xoog badan yihiin duufaannada
Jawaab ANTONIO MIRANDA CRESPO
isticmaalaha nazi dijo
Sharaxaad wanaagsan, bilowga waxaad gelisay ereyga ´´te .piuedo. xigasho
Duufaan '' iwm waan kuu sheegay sababta aad u dhigtid piuedo.
Laakiin sharaxaad aad u wanaagsan. sii wad
U jawaab isticmaale Nazi